1 Ndị Tesalonaịka 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Ndị Tesalonaịka 2:1-20
2 Ụmụnna anyị, n’ezie, unu onwe unu maara otú nleta+ anyị letara unu si bụrụ nke rụpụtara ihe.+ 2 Unu makwaara otú anyị si nwee nkwuwa okwu site n’enyemaka Chineke, anyị wee gbasie mgba ike zie+ unu ozi ọma Chineke mgbe anyị bu ụzọ tasịa ahụhụ,+ e meekwa anyị ihe ihere+ na Filipaị+ (dị nnọọ ka unu maara). 3 N’ihi na ndụmọdụ anyị na-enye adịghị esite ná njehie ma ọ bụ adịghị ọcha+ ma ọ bụ aghụghọ, 4 kama, dị ka Chineke nwapụtaworo na anyị bụ ndị ruru eru ka e nyefee+ anyị ozi ọma ahụ n’aka, otú ahụ ka anyị na-ekwu, ọ bụghị dị ka ndị na-eme ihe dị ndị mmadụ mma,+ kama dị ka ndị na-eme ihe dị Chineke mma, bụ́ onye na-enyocha obi anyị.+ 5 N’eziokwu, ọ dịghị mgbe anyị ji okwu ịja mma efu bịa,+ (dị nnọọ ka unu maara). Anyị abịaghịkwa dị ka ndị ihu abụọ+ bụ́ ndị nwere anyaukwu.+ Chineke bụ onye akaebe! 6 Anyị anọghịkwa na-achọ otuto n’aka ndị mmadụ,+ ee e, ma ọ̀ bụ site n’aka unu ma ọ bụ site n’aka ndị ọzọ, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịbụ oké ibu arọ+ dị ka ndịozi Kraịst. 7 Kama nke ahụ, anyị ghọrọ ndị dị nwayọọ n’etiti unu, dị ka mgbe nne nke na-enye nwa ara na-elekọta+ ụmụ ya. 8 Ya mere, ebe anyị nwere ịhụnanya dị ukwuu n’ebe unu nọ,+ ọ masịrị anyị ọ bụghị naanị izi unu ozi ọma Chineke, kamakwa inye unu mkpụrụ obi anyị,+ n’ihi na unu ghọrọ ndị anyị hụrụ n’anya.+ 9 N’ezie, ụmụnna anyị, unu na-echeta ọrụ anyị rụsiri ike na ndọlị anyị dọlịrị. Ọ bụ site n’ịrụ ọrụ+ abalị na ehihie ka anyị kwusaara unu ozi ọma Chineke, ka anyị wee ghara ibo onye ọ bụla n’ime unu oké ibu arọ.+ 10 Unu bụ ndị akaebe, Chineke bụkwa onye akaebe, banyere otú anyị si guzosie ike n’ebe unu bụ́ ndị kwere ekwe nọ, bụrụkwa ndị ezi omume na ndị a na-apụghị ịta ụta+ n’ebe unu nọ. 11 N’otu aka ahụ, unu maara nke ọma na, dị ka nna+ si eme ụmụ ya, otú ahụ ka anyị si na-adụsi onye ọ bụla n’ime unu ọdụ ike,+ na-agụgụkwa unu ma na-agbara unu àmà, 12 ka unu wee na-eje ije+ n’ụzọ kwesịrị ekwesị n’ihu Chineke, bụ́ onye na-akpọ+ unu ka unu banye n’alaeze ya+ nakwa n’ebube ya. 13 N’ezie, ọ bụ ya mere anyị jikwa na-ekele Chineke n’akwụsịghị akwụsị,+ n’ihi na mgbe unu natara okwu Chineke,+ bụ́ nke unu nụrụ n’ọnụ anyị, unu nabatara ya, ọ bụghị dị ka okwu ụmụ mmadụ,+ kama, dị nnọọ ka ọ bụ n’eziokwu, dị ka okwu Chineke, bụ́ nke na-arụkwa ọrụ n’ime unu ndị kwere ekwe.+ 14 N’ihi na, ụmụnna anyị, unu ghọrọ ndị na-eṅomi ọgbakọ Chineke ndị dị na Judia n’ime Kraịst Jizọs, n’ihi na unu malitekwara ịta ahụhụ+ n’aka ndị obodo unu n’otu ihe ndị ahụ nke ha na-atakwa ahụhụ ha n’aka ndị Juu, 15 bụ́ ndị gburu ọbụna Onyenwe anyị Jizọs+ na ndị amụma+ ma kpagbuo anyị.+ Ha adịghịkwa eme ihe dị Chineke mma, kama ha na-emegide ọdịmma nke mmadụ niile, 16 ka ha na-anwa igbochi+ anyị ịgwa ndị mba ọzọ okwu ka e wee zọpụta ha,+ nke mere na ha na-emeru mmehie ha n’isi+ mgbe niile. Ma ọnụma ya emesịwo bịakwasị ha.+ 17 Ma anyị onwe anyị, ụmụnna anyị, mgbe a manyere anyị ka anyị hapụ unu n’anụ ahụ́ ruo naanị mkpirikpi oge, ma unu apụghị anyị n’obi, anyị ji ọchịchọ dị ukwuu gbaa mbọ karịa nnọọ otú o kwesịrị ka anyị hụ ihu unu.+ 18 N’ihi nke a, anyị chọrọ ịbịakwute unu, ee, mụ bụ́ Pọl, ma otu ugboro ma ugboro abụọ, ma Setan nọchiiri anyị ụzọ. 19 N’ihi na olee ihe bụ́ olileanya anyị ma ọ bụ ọṅụ anyị ma ọ bụ okpueze+ aṅụrị anyị—ee, ọ́ bụghị unu n’eziokwu?—n’ihu Onyenwe anyị Jizọs n’oge ọnụnọ ya?+ 20 N’ezie, ọ bụ unu bụ ebube anyị na ọṅụ anyị.
1 Ndị Tesalonaịka 2